Ian Wright Oo Wacay Alexandre Lacazette Islamarkaana Raaligeliyay & Halyeeyga Arsenal Oo Sharaxay Qaladkii Uu Ku Kacay | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaIan Wright Oo Wacay Alexandre Lacazette Islamarkaana Raaligeliyay & Halyeeyga Arsenal Oo Sharaxay Qaladkii Uu Ku Kacay
Ian Wright Oo Wacay Alexandre Lacazette Islamarkaana Raaligeliyay & Halyeeyga Arsenal Oo Sharaxay Qaladkii Uu Ku Kacay
Ian Wright ayaa shaaca ka qaaday inuu wacay Alexandre Lacazette islamarkaana uu u sharaxay sababtii uu ugu maadeystay cabaadkii ka baxay kulankii Burnley markii uu ka qeyb galay barnaamijka BBC ee Match of the Day.
Isaga iyo daadihiyaha barnaamijka Gary Lineker iyo khabiirka kale Dion Dublin ayaa ku maadeystay weeraryahanka Arsenal kaasoo cabaad qeylo ah sameeyay isagoo lugta heysta ka dib qalad lagu galay ciyaartii ka dhacday garoonka Turf Moor.
Laakiin inkastoo uu sheegay in cabaadka ciyaartoyda uu yahay mid laga maarmo hadana Wright ayaa dareemay inay qasab ku noqotay inuu waco weeraryahanka Faransiiska sababtoo ah xiriirka ka dhaxeeya iyo inuu isagu yahay halyeey Arsenal ah oo ku maadeystay xiddig Arsenal ah.
“Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan ku qaldanaa wixii aan sameeyay” ayuu yiri weeraryahankii hore Arsenal Ian Wright.
“Kaliya dhibaatada aan qabnay waa cabaadka qeylada ah. Xaqiiqda waxay tahay aniga iyo ragga kaleba waligeen ma aanan jecleynin ciyaartoyda cabaad la qeyliya.
“Haatan waan maqli karnaa madaama garoonka aysan taageerayaal joogin, waxaana ka hadleynaa cabaad qeylo weyn ah oo aad mararka qaar isweydiineyso waxa ka qaldan ciyaaryahanka.
“Isbuucaan Laca ayay noqday qofkiisa sameeyay, waa inaan qiro inaan ku qaldanaa wixii aan sameeyay, xaqiiqda ayaa ah inaan ku maadeystay ciyaaryahan Arsenal ah.
“Aniga iyo Laca xiriir fiican ayaan leenahay muddo dheer.”
Lacazette ayaa la maqli karay isagoo si qeyn u qeylinaya markii uu qalad kala kulmay Erik Pierters kulankii barbaraah 1-1 ku dhamaaday ee Burnley.
Laakiin inkastoo sida iska cad uu Lacazette ka badbaadiyay in xanuun uu hayo hadana wuu kacay isagoo ciyaarta sii watay.
Ian Wright ayaa yiri: “Waxaan wacay subaxnimadii Axada si aan u raaligeliyo.
“Waxaa laga dhigay inaan si gaar ah ugu maadeysanayo Laca laakiin waxaan ku maadeysaneynay qeylada kaliya.
‘”Qaladkeyga ugu weyn waa qeyladii maada aheyd ee aan sameeyay. Waxaan ahay doqon. Dhibaato uma ahan Gary Lineker ama Dion Dublin, laakiin aniga waa inaan aqbalo waxay ay u la micno tahay taageerayaasha Arsenal oo dareemay inaan weerarayo mid ka mid ah ciyaartoydeena”
"Waa In Koobabkii Ay Haysteen Laga Qaado Manchester United, Liverpool & Arsenal, Waa In Dhibco Laga Jaro, Heerka Labaadna Loo Celiyo"